INdoni ibe yimpumelelo | News24
INdoni ibe yimpumelelo
Izithombe: zithunyelwe Dkt Nomcebo Mthembu ngesikhathi efika mbimcini weNdoni obungo Mgqibelo.
ISICOCO somcimbi kaNobuhle owaziwa ngokuthi yiNdoni obungoMgqibelo mhla ka-10 eDurban International Convention Centre (ICC), sithathwe intombi yabaSotho uPutseleso Maloka (19).
Lo mcimbi okungo wesine kulo nyaka obunesiqubulo samaAfrika (African Theme) lapho izihambeli bezihlobe ngezingubo zeSintu ezinemibala eyehlukahlukene.
Lo mcimbi ubune zihambeli kubalwa oNgqongqoshe baseNingizimu Afrika nabezifunda ezahlukene kanye nosaziwayo.
Umphathi wohlelo lwalo mcimbi bekuyintokazi edume kakhulu ngezinkondlo zayo uLebo Mashile, okubonakale sobala ukuthi izihlwele bezimthokozela.
Umsunguli weNdoni, uDkt Nomcebo Mthembu uthe izintokazi ebezingenele lo mcimbi zibonakale nezingubo ezimele amaSiko ahlukahlukene ziphelezelwe amaqembu amele ezamaSiko kodwa ekugcineni kosuku isicoco sithathwe iNdlovukazi yabaSotho uPutseleso Maloka, ophume phambili sekusele izintokazi eziyi-6 kubalwa uNyandisa Komnga noFlorence Vulthlari.
“Unobuhle othathe isicoco seNdoni uPutseleso Maloka ophinde wazitholela imoto entsha nemali yomfundaze ebalwelwa ku-R100 000. Indoni ikholelwa ekutheni seloku yaqala lo nobuhle ibonakala ikhula ngendlela eyisimanga futhi akukho okuzoyi vimba ukuthi iqhubeke nalo mcimbi eminyakeni ezayo,” kusho uDkt Mthembu